I-Cabana El Sol
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Carolina
Ikotishi elizimele nelithokomele nelizungezwe imvelo, Itholakala endaweni ekhethekile ebizwa ngeLlanogrande. uzothatha imizuzu engama-45 ukufika edolobheni elihle laseMedellin, imizuzu eyi-19 ukusuka esikhumulweni sezindiza iJose Maria Cordova International, imizuzu eyi-14 ukusuka kumabha, izindawo zokudlela nezindawo zokuzijabulisa.
Ukuzola nokuthula ukuphumula kuzungezwe imvelo. Eduze nezitolo ezinkulu, izikhungo zezitolo, izindawo zokudlela, izibhedlela, amasinema, amasonto, isikhumulo sezindiza kanye nezindawo zokuzijabulisa.
4.92 ·93 okushiwo abanye
4.92 · 93 okushiwo abanye
Uma uthanda i-adventure futhi uthole izindawo ezintsha ngaphandle kokuba seduze kakhulu nedolobha lase-Medellin nakho kuseduze ne-La Ceja, i-El Retiro, i-El Peñol nemizana emihle ezungezile enezela ukubaluleka kokuhlala kwakho.
Unikezwa ubumfihlo obuphelele, nokho sisenkonzweni yakho ukukusiza kulokho okudingayo ukuze uhlale isikhathi esijabulisa kakhudlwana.